Prototype yeApple Watch inoratidza chinongedzo che "smart band" | Ndinobva mac
Prototype yeApple Watch inoratidza chinongedzo che "smart band"
Iyo Apple inotarisira kushongedza iyo Apple Watch ne connector Kugona kudyidzana neash, haina kure kutorwa. Zvinokubhadharira iwe zvishoma kuisa kadhi yekubatanidza mune iyo kesi uye nekudaro kukwanisa kutumira kana kugamuchira dhata kubva kune rumwe rudzi rwe smart tambo. Izvo zvaive zvichitofunga nezve series 3.
Zvirinani, sezviri pachena mune isingawanzo prototype ye Nhepfenyuro dzeApple 3, iyo inosanganisa diki yekubatanidza mukati meiyo slot yenyaya panogara matambo ewachi. Pfungwa yakanaka, isu hatizive kana ichiri mupombi uye pakupedzisira ichazobuda pachena mune dzakateedzana, kana yakanamatira mune iyo prototype iyo yakachengetedzwa kubva pakuparadzwa nekambani.
Chinhu chakajairika mumakambani ese anogadzira zvigadzirwa zvavo ndezvekuti ivo kuparadzwa kana chirongwa chapera. Kupfuura chero chinhu kuitira kuti mazano arege kuburitswa ekuti pakupedzisira hausashandise, asi anogona kupedzisira ave pamakwikwi anokwikwidza
Uye semuenzaniso wechirevo ichi che «kuparadzwa kweuchapupu» ndiyo mifananidzo yeiyo kumumvuri kuti nekuda kwechimwe chikonzero akapunyuka kubva mukuparadzwa uku. Giulio Zompetti, mugadziri uye muteresi weApple prototypes, yagadzira imwe yakasarudzika.
Iwe une chidimbu chakasarudzika chako. Prototype yeApple Watch Series 3 ine chinongedzo kuti ugone kutaurirana neimwe mhando ye "smart" tambo. Chaizvoizvo tsvaga, pasina kupokana.
Apple inogona kunge yakaedza pane mamwe "akangwara mabhendi" mukudzokorora kwekutanga kweApple Watch S3.
Pane ino prototype unit, maviri asina kujairika mapedhi akafumurwa kubhendi, senge rudzi rwe "Smart Connector" isu tatoona paPads.#AppleCollection #AppleWatch pic.twitter.com/uVFZHuvuAe
Iyo chishandiso inoratidza maviri esimbi macontact mukati meimba slot, panosungirirwa tambo, kune rumwe rutivi rwechiteshi chekutaurirana. Zompetti anotenda kuti matemu maviri asina kujairika akafumurwa kuti asangane netambo, uye inogona kunge iri mhando ye "Smart Kubatanidza"Zvakafanana neiyo iPad, kuchinjana dhata neimwe mhando ye" smart "tambo.
Apple ine zvakawanda patent pamabhande akachenjera
Apple yakapihwa yakawanda nhamba ye patent kutenderedza smart mabhendi eApple Watch, izvo zvinoratidza kuti icho chinhu icho kambani yanga ichishanda kwemakore. Mamwe maratenzi anoratidza mazano akasiyana senge biometric kuvimbiswa, kuzvisimbisa kana kuisa mune tambo yemabhatiri, masikirini, makamera, maseru enjodzi yeropa, nezvimwe.
Chatisingazive ndechekuti pfungwa iyi yaive here yakapakwa mudhirowa mushure mekuburitswa kweakateedzana 3, kana kambani iri kuenderera mberi ichishanda pairi, uye prototype iyi inozoitika muchirongwa chinotevera 7 kana 8. Kana rwizi ruchirira, mvura inotakura….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Prototype yeApple Watch inoratidza chinongedzo che "smart band"
Iyo yakamirirwa kwenguva refu Nhepfenyuro yeApple TV +, kutanga kuratidzwa munaGunyana
Opera inogadziridza bhurawuza rayo reMac ine yekufona vhidhiyo mafoni uye nedzimwe nhau